Mahaiza mivarotra - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
EcubWare 4.2.1 Boky Torolàlana
Marketing amin'ny Affiliate
Tranonkala teo aloha
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia fanontana 3D, ny fampiharana ny mpanonta 3D dia malaza kokoa amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona. Toa fanararaotana lehibe ahazoana vola izany ary hananganana ny asanao amin'ny tontolo vaovao. Iray amin'ireo mpanamboatra voalohany indrindra amin'ny tsenan'ny fanontana 3D, za-draharaha amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary marketing. Mba hanamorana ny olona hankafy ny fahafinaretan'ny mpanonta 3D, ary hanamora kokoa ny fampiasan'ny mpankafy EcubMaker 3D antsika mpanonta, i EcubMaker dia mitady mpivarotra, mpaninjara ary mpivarotra manerantany! Hatramin'izay, ny mpanjifanay dia mandrakotra ny asan-dahalo sy ny varotra rehetra, toy ny mpivarotra ambongadiny, ny mpivarotra antsinjarany, ny fanabeazana sns ... Tsy maninona ny faniriana hanangana orinasanao, na manana hevitra tsara hafa momba ny mpanonta 3D ianao. Raha mieritreritra ianao fa manana traikefa tsara amin'ny fananana marika manokana. Misy serivisy OEM. Tongasoa ianao hiaraka aminay amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha-orinasa mpikaroka sy famolavolana fanontam-pirinty 3d voalohany anay, dia ataonay laharam-pahamehana hatrany ny kalitao, mifantoka amin'ny fanaovana ny mpanonta pirinty tsara indrindra miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta ary manolotra serivisy tsara indrindra ho an'ny rehetra. Tongasoa daholo ianareo mivarotra ny vokatray. Ny tanjonay dia ny hamela ny fahatokisanao ho tonga harena. Te hanana toe-javatra mandresy izahay ary hanangana fifandraisana maharitra.
1. Tombony marika:
EcubMaker 3D Technology, izay natsangana tamin'ny 2013, dia manam-pahaizana manokana amin'ny fampidirana ny fikarohana, ny famolavolana ary ny varotra amin'ny fanaovana pirinty 3d iray manontolo. Ho fanampin'izay, ny horonantsary fanombanana ataon'ny mpanonta EcubMaker dia nahita fomba fijery an'arivony maro tao amin'ny YouTube. Tranonkala fanontam-pirinty 3D matihanina maro no nandinika tsara ireo mpanonta anay, nanisy marika anay ho marika sarobidy tsara indrindra imbetsaka, toy ny Gadget Flow, Roboturka, 3Dpc.com sns.
2. Fanohanana ny teknolojia sy ny serivisy
Ekipan'ny injeniera EcubMaker R&D manana injeniera mahay be dia be no manana traikefa ara-teknika lalina amin'ny fanontana 3D apetraka hanomezana haitao matihanina. Mandritra izany fotoana izany, ny serivisy varotra tsara indrindra omen'ny manam-pahaizana manokana EcubMaker 3D. Manana ekipa serivisy avo lenta avo lenta izahay, manaraka ny foto-kevitry ny "Customer Matters" miaraka amina rafitra serivisy manara-penitra, mahomby, ary mangarahara. Hatreto dia manana laza avo eo amin'ny fanohananay aorinan'ny varotra izahay noho ny ny valiny haingana sy ny fiaraha-miasa am-pirahalahiana.
3. Kalitao azo antoka
Ny vokatray rehetra dia nandalo taratasy fanamarinana kalitao iraisam-pirenena sy tontolo iainana marobe toy ny FDA, CE, FCC, ary ROHS, sns. Nametraka tanjona telo ao anatin'ny orinasa izahay. Ny faritra rehetra dia nosedraina imbetsaka talohan'ny namenoana azy ary ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao efa za-draharaha dia nandalo fitsapana nandritra ny fotoana maharitra ho an'ny mpanonta printy tsirairay mba hahazoana antoka fa napetraka ny sambo. Mba hahatratrarana ny fizarana farany fonosana dia mila mandalo ny fitsapana fanaraha-maso kalitao ny mpanonta raha tsy izany dia andefasantsika izany ho an'ny departemanta fanarenana. Ny boaty dia feno Styrofoam avo lenta hiarovana ny mpanonta avy amin'ny famindran-toerana avo ary tsy maintsy mandalo ny fitsapana fiaretana alohan'ny vonona amin'ny fandefasana azy. Ka na iza na iza dia afaka matoky fa ho tonga amin'ilay toerana ilay mpanonta nefa tsy misy fahasimbana anatiny amin'ny fitaterana.
4. Vidiny ara-toekarena
Mino izahay fa ny mpanonta anay dia natao ho an'ny sokajy olona rehetra. Tsy mieritreritra momba ny mpanjifa mihitsy izahay. Ka eritrereto ny vidiny arakaraka ny tombony kely indrindra ary omeo ny serivisy tsara indrindra ho an'ny faritra tsirairay. Ny vidin'ny vokatra dia mora vidy kokoa noho ny mpanonta sokajy ankehitriny. Satria mitady orinasa lava izahay, dia te hanana fahatokisana fa tsy hieritreritra tombony fotsiny. Ny andrasan'ny EcubMaker dia ny hanamorana ny olon-drehetra hahafantatra momba ny teknolojia fanontana 3D ary hankafy ny fahafinaretana amin'ny fanatanterahana ny nofinofisin'izy ireo. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny vidin'ny ambongadiny raha ilaina ny mividy be dia be. Amin'ny alàlan'ny fividianana tombony betsaka sy fitantanana fandrosoana mandroso, EcubMaker dia mampihena be ny vidin'ny vokatra hahazoana antoka ny tombotsoan'ny mpivarotra, mba hanampiana ny mpampiasa farany hitahiry vola.
Inona no antenainay aminao?
• Manana fahatakarana tsara kokoa momba ilay mpanonta izay tadiavinao.
• Lazao anay ny momba ny drafi-pandraharahana sy ny orinasanao.
• Miaraha miasa aminay momba ny vidiny. Satria manolotra anao hatrany ny vidiny azo ifampiraharahana indrindra izahay.
• Amporisiho mavitrika ny marika sy ny kolontsainay fanontana 3D.
• Raha liana amin'ny dropshipping ianao, dia tena tso-po izahay hiara-miasa aminao.
Ahoana ny fomba fampiharana?
Soraty eto: Sales01@zd3dp.com
Mifandraisa aminay na dia ity mailaka ity aza. Maimaimpoana hilaza aminay momba anao sy ny fomba ahafahantsika mampivelatra fifandraisana amin'ny orinasa maharitra. Manantena ny mailakao izahay. Ho azonao ny valiny raha vantany vao voarainay izany. Misaotra betsaka amin'ny fotoananao.
Aiza no hividianana
© Copyright - 2014-2020: Voatahiry ny Zo rehetra.